Bhinzi chena uye yakafara bhinzi yakabikwa nemadomasi | Bezzia
Bhinzi chena uye yakafara bhinzi yakabikwa nemadomasi
Maria vazquez | 06/06/2021 10:00 | Muriwo
Isu takatora mukana wekuti yakatonhorera kuchamhembe kugadzirira a chikafu chinonyaradza kwazvo, chikafu chebhinzi chena uye bhinzi yakafara nemadomasi. Kunyangwe mwaka webhinzi wapera, tichine zvimwe zvekuchengetedza uye hatina kuda kuzviparadza.
Ichi chidimbu chiri nyore kwazvo, kunyangwe runyorwa rurefu rwezvigadzirwa. Uye ndezvekuti isu takapinza mazviri a zvekunze kubata kuburikidza nezvinonhuwira zvakasiyana uye chikamu chemukaka wekokonati. Kana iwe ukasashinga nezvinhu izvi kana usina, unogona kutsiva zvinonhuwira zvevamwe zvekuda kwako uye mukaka wekokonati kune iwo wakaenzana muto.
Kutsiva kunogona kuitwa kwakawanda kunyangwe, zviripachena, kana izvi zvangoitwa, mhedzisiro inozove nepadiki kana isina chekuita nezvatakawana. Kunyangwe zvakadaro, icharamba iri yakanaka dhishi kuti upedze yako yevhiki menyu. Iwe unotsunga kuzviedza here?
1 Zvisungo zve 2-3
Zvisungo zve 2-3
3 akaibva peya matomatisi, akasvuurwa uye akachekwa
1/2 teaspoon yekumini
1 teaspoon yeGaram Masala
1 tsama bhinzi yakafara
2 magirazi emvura kana yemuriwo muto
1 girazi remukaka wekokonati
1 poto yebhinzi chena yakabikwa
Isa zvipunu zviviri zvemafuta mupoto uye sungai anyanisi pamusoro pemhepo inopisa negariki kwemaminitsi gumi.
Pashure wedzera tomato uye bika kusvikira yatanga kuparara. Iwe unogona kuibatsira nekumhanyisa uye kukwiza iyo tomato.
Kamwe kana nyanya nyoro, Wedzera zvinonhuwira, bhinzi nemvura, sanganisa uye bika kwemimwe maminetsi mashanu pamusoro pekupisa kwepakati nepani yakavharwa.
Tevere, suka bhinzi pasi pemvura inotonhorera uye wobva wawedzera kune iyo casserole. pamwe nemukaka wekokonati. Sanganisa uye gadzirira imwezve maminetsi mashanu kubvumira iwo mavhenekeri kuti asangane.
Shumirai bhinzi chena uye yakafara bhinzi yakabikwa nemadomasi, inopisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Muriwo » Bhinzi chena uye yakafara bhinzi yakabikwa nemadomasi
Maitiro ekuwana uye kugara unokurudzirwa
Nzira yekugadzira maziso mashoma